कथा अनुसार एक धनी व्यापारी तल्कालीन अमरपुर शहरमा बस्थे । उसको व्यवसाय टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो । सबैले उक्त व्यापारीलाई आदर गर्थे । यी सबैका बाबजुद पनि, व्यापारीको अन्तःकरणले गहिरो दुख महशुश गरिरहेको थियो किनभने त्यस व्यापारीका सन्तान थिएनन् । दिन रात त्यही चिन्ताले ग्रस्त थियो । छोरा जन्माउने चाहनाले उ हरेक सोमबार उपवास र भगवान शिवको पूजा गर्दथ्यो । साँझ भगवान् शिवको अगाडि घीउको बत्ती जलाउथ्यो । व्यापारीको भक्ति देखेर एक दिन पार्वतीले भगवान शिवलाई भनिन् हे प्राणनाथ । हजुरले यो व्यापारीको इच्छा पूरा गर्नुपर्दछ । यो हजुरको विशेष भक्त हो । प्रत्येक सोमबार तपाईं विधिवत पूजा अर्चना पछि, तपाईं लाई एक पटकको लागि भोजन प्रस्ताव गर्छन् । तपाईंले यसलाई छोरा उपहार दिनुपर्दछ । पार्वतीको यस्तो आग्रह देखेर भगवान शिवले भने तिम्रो अनुरोधमा म यस व्यापारीलाई छोराको उपहार दिन्छु । तर उसको छोरो केही बर्ष भन्दा बढी बाँच्ने छैन । सोही रात, भगवान शिव सपनामा त्यस व्यापारीका अगाडि देखा परे र उनलाई एउटा छोरो जन्माउने वरदान दिए र उनको छोरो १२ बर्षसम्म बाँच्छ भनि सुनाइदिए ।
व्यापारी भगवानको वरदानमा खुशी थियो, तर छोराको उमेरको चिन्ताले ग्रस्त हुनथाल्यो । व्यापारीले पहिले जस्तै सोमबार व्रत पालन जारी राख्यो । केही महिनापछि, एक सुन्दर छोराको जन्म भयो । घरमा खुशी छायो । तर व्यापारी छोराको जन्मसँग खुशी थिएन किनभने उसलाई छोराको जवानीको रहस्य थाहा थियो । कसैलाई पनि यो रहस्य भनेको थिएन । विद्वान ब्राह्मणहरूले त्यो छोरोको नाम अमर राखे । जब अमर १२ बर्षको भयो, उसलाई शिक्षाको लागि वाराणसी पठाउने निर्णय गरियो । व्यापारीले अमरका मामा दीपचन्दलाई बोलाए र शिक्षा ग्रहण गराउन वाराणसी लैजान भने । अमर आफ्नो मामासँग शिक्षा लिन गए । लामो यात्रा पछि अमर र दीपचन्द एक सहरमा पुगे । बाटोमा, जहाँ अमर र दीपचन्दले रात बिताए । त्यसबेला त्यस शहरका राजाकी छोरीको विवाहको खुशीमा सम्पूर्ण शहर सजाइएको थियो । विवाहको जन्ती निश्चित समयमा आइपुगेको थियो, तर दुलहाका बुबा चिन्तित देखिएका थिए । किनभने उनको छोराको एउटा मात्र आँखा थियो । उनी डराएका थिए यदि राजाले यसबारे थाहा पाए भने विवाह अस्वीकार हुनेछ । जब दुलहाका बुबाले सून्दर युवा अमरलाई देखे, उनको दिमागमा एउटा विचार आयो । उनीले सोचे कि यस केटोलाई दुलाहा बनाएर राजकुमारीसँग विवाह गराउँछु । विवाहपछि, म यसलाई केही रुपैया दिनेछु र राजकुमारीलाई मेरो शहरमा लैजानेछु र बुहारी बनाउनेछु ।
दुलाहाको बुबाले यस सम्बन्धमा अमर र दीपचन्दसँग सल्लाह गरे । दीपचन्दले पैसा पाउने लोभमा दुलाहाका बाबुको वचनलाई स्वीकार गरी विवाह भयो । अमर फर्कने क्रममा सत्य लुकाउन सकेन र उसले राजकुमारीको घुम्टोमा लेखेः ’राजकुमारी चन्द्रिका, तिमी मसँग विवाहित भयौ, म वाराणसीमा शिक्षा प्राप्त गर्ने छु । अब ती जवान मानिस जसको तिमीले पत्नी बन्नु पर्छ उनी काना छन् । जब राजकुमारीले उनको लुगामा लेखिएको देखिन्, उनले त्यस केटोसँग जान अस्वीकार गरिन् । राजाले सबै कुरा थाहा पाएपछि राजकुमारीलाई दरबारमै राखे । अमर आफ्नो मामा दीपचन्दसँग वाराणसी पुगर शिक्षा अध्ययन गर्न थाले ।
जब अमरले पूर्व निश्चित बर्षको उमेर पूरा गरे, व्यापारीले घरमा यज्ञ आयोजना गरे । यज्ञको अन्त्यमा, ब्राह्मणहरूलाई खाना खुवाइयो र द्रव्य र लुगा दान दिईयो । उता अमर रातीको समयमा शयन कक्षमा सुते । भगवान शिवको वरदान अनुसार अमरको मृत्यु हुँदा उनको जीवन र शरीर उड्यो। सूर्योदय हुँदा अमरलाई मरेको देखेर मामा रोए । मानिसहरू वरपर जम्मा भए र दुः ख व्यक्त गर्न थाले । भगवान् शिव र माता पार्वतीले पनि मामाको रुवाई देखे । पार्वतीजीले भगवानलाई भनिन् प्राणनाथ ! म उसको पुकारा सुन्न सक्तिन । हजुरले यस व्यक्तिको कष्ट हटाउनु पर्छ । यसपछि भगवान शिव अमरको नजिक अदृश्य रूपमा पार्वतीका साथमा गएर भेटे र अमरलाई देखे, उनले पार्वतीलाई भने पार्वती ऊ उही व्यापारीको छोरा हो । मैले १२ वर्षको उमेरमा भई यसलाई वरदान दिएँ । यसको जीवनकाल पूरा भयो । पार्वतीजीले भगवान शिवलाई अनुरोध गरिन् हे प्राणनाथ ! तपाईलै यो केटालाई जीवित बनाउनुहोस् । अन्यथा, यसका बाबुआमा छोराको मृत्युको कारण वेहोस हुनेछन् । यस केटाको बाबु हजुरका सच्चा भक्त हुन् । पार्वतीको आग्रहमा, भगवान शिवले केटालाई पुनः जीवित गराए ।
अध्ययनपछि उनी आफ्ना मामासँग आफ्नो शहर फर्किदा । उही शहरको बाटो फर्किए जहाँ अमरको विवाह भएको थियो । त्यो शहरमा पनि अमरले यज्ञ गराए । शहरका राजा, दरबारको बगैंचाबाट निस्के । राजाले तुरुन्तै राजाले चिने । यज्ञको अन्त्यमा, राजाले अमर र उनका मामालाई दरबारमा लगे र केही दिन उनीहरूलाई दरबारमा राखे र उनीहरूलाई अनेक द्रव्यहरु दिए र राजकुमारी पनि सगैँ पठाईदिए ।
बाटोमा सुरक्षाको लागि राजाले सिपाहीहरू पठाए । शहरमा पुग्ने बित्तिकै दीपचन्दले उनको आगमनको बारेमा सन्देशवाहक पठाए । छोरा अमर जीवित रहेको खबर पाउँदा व्यापारी खुशी भए । व्यापारी आफ्नी श्रीमतीको साथ खुशी देखिए ।
धेरै दिनदेखि भोकाएका र तिर्खाएका, व्यापारी र उसकी पत्नी आफ्नो छोराको निम्ति पर्खिरहेका थिए । उसले आफ्नो छोराको मृत्युको खबर पाउने बित्तिकै दुबैले आफ्नो ज्यान गुमाउने वचन दिएका थिए । छोराको विवाहको खबर सुनेपछि्बुहारी राजकुमारी चन्द्रिकालाई देखेर खुसी मात्र भएनन् । सोही रात भगवान शिव व्यापारीको सपनामा आए र भने ’हे महान भक्त ! मैले तिम्रो छोरोलाई लामो जीवन दिएँ । तिम्रो सोमबारका कथा सुन्न पाउँदा र ब्रत देख्न पाउँदा म खुशी छु । व्यापारी धेरै खुसी थिए । धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ कि सोमबार विधिवत उपवास बसेमा महिला र पुरुषहरूको सबै इच्छा पूर्ण हुन्छन् ।